နိုင်ငံတကာသတင်း Archives - Lupyo News
နှစ်သုံးဆယ်လုံးလုံး ဟော်တယ်ထဲနေပြီး ချောင်းလာသူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံ
November 29, 2020 by Lupyo News
နှစ်သုံးဆယ်လုံးလုံး ဟော်တယ်ထဲနေပြီး ချောင်းလာသူရဲ့ အတွေ့အကြုံ Gerald Foos ဆိုတဲ့ အမျိုးသားဟာ Colorado မှာ နေထိုင်ပြီး သူဟာ ဟော်တယ်အပိုင်တစ်လုံးရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဟော်တယ်နာမည်ကတော့ The Manor House Hotel ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ဟော်တယ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပေမယ့် စုံတွဲတွေရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်တွေမှာ ဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 1966 ခုနှစ်ကနေ စပြီး Gerald Foos ဟာ သူ့ဟော်တယ်ကို လာတည်းသမျှ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ အခန်းကို နှစ် 30 တိတိ ချောင်းကြည့်ခဲ့တဲ့ ချောင်းကြည့်ဆုံး လူသားဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ အခန်းတွေတိုင်းမှာ လျှို့ဝှက်အပေါက်တွေ ဖောက်ပြီး လုံခြုံတဲ့ နေရာကနေ ချောင်းကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ မိန်းမရပြီးချိန်ထိ ဒီလို အလုပ်ကို လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တော့ သူ့မိန်းမကိုပါ ခေါ်ပြပြီး ချောင်းကြည့်သူဟာ နှစ်ယောက်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့ဟာ … Read more
ချစ်သူ သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေးနဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်
November 26, 2020 by Lupyo News
ချစ်သူ သစ္စာ ရှိမရှိကို မော်ဒယ်မလေးနဲ့ စမ်းသပ်မိတဲ့ အမျိုးသမီး ရဲ့ မလှတဲ့အဆုံးသတ် လက်တလောမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ ‘To CatchaCheater’ အစီအစဉ်ဟာ YouTube မှာလည်း အလွန်အောင်မြင်နေတဲ့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်မှာ မိမိတို့လက်တွဲနေတဲ့ လက်တွဲဖော်တွေကို သစ္စာရှိမရှိ စမ်းသပ်ဖို့အတွက် ‘To CatchaCheater’ အစီအစဉ်လျှို့ဝှက်ရိုက်ကူးရေးသမားတွေက တောင်းဆိုသူတွေကို သီးသန့်စီစဉ်ပေးတာပါ။ အခုလည်း အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ ချစ်သူ သစ္စာရှိမရှိကို စမ်းသပ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ချစ်သူဟာ ကွန်ပျူတာပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ကွန်ပျူတာကို ပြင်ပေးဖို့ဆက်သွယ်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ဖုန်းဆက်ခေါ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီအမျိုးသမီးဟာ ‘To CatchaCheater’ မှာ ဖျားယောင်းသူအဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်ပါ။ … Read more
ချစ်သူကောင်မလေးက အခြားတစ်ယောက်နဲ့ အိပ်ယာထဲအတူ အိပ်နေတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား
November 23, 2020 by Lupyo News
ချစ်သူကောင်မလေးက အခြားတစ်ယောက်နဲ့ အိပ်ယာထဲအတူ အိပ်နေတာကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသား Zawgyi ဒီအမျိူးသားရဲ့ နာမည်ကတော့ Duston Holloway ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တရက်မှာ ညဘက်ကြီး အိမ်ပြန်လာစဉ် သူ့ရဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးဟာ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ အိပ်ယာထဲမှာ အတူအိပ်နေတာကို တွေ့ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် Duston ဟာ တော်တော်လေး ဒေါသထွက်ခဲ့ပေမယ့်လည်း သူ့ရဲ့ဒေါသကို ထိန်းချုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Duston ဟာ သူ့ရဲ့အိပ်ယာထဲမှာအိပ်နေတဲ့ ချစ်သူကောင်မလေးနဲ့ အခြားယောကျာ်းနဲ့အတူ selfie ပဲရိုက်ပီး လူမှုကွန်ယက်မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ Duston ဟာ ဒီပုံတွေကို အိမ်ပြန်ရောက်ချိန် ကိုယ်ချစ်မြတ်နိူးရတဲ့သူနဲ့ အခြားယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို အိပ်ယာထဲမှာ အတူတွေ့ရတဲ့အခါ ဆိုတဲ့ caption နဲ့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပီး ကောင်းမွန်တဲ့ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ပဲ … Read more
November 20, 2020 by Lupyo News
ဆင်းရဲလွန်းသော်လည်း လူ့အသက်နှစ်ထောင်ခန့်ကိုကယ်တင်လိုက်နိုင်တဲ့ သားအဖ Zaw Gyi အောကျတှငျ Unicode နှငျ့ ဖတျရှု့နိုငျပါသညျ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တြိပူရပြည်နယ် အမ်ဘက်ဆာမြို့မှ ဆွာပန်ဒက်ဘားမားဆိုသူ အမျိုးသား တစ်ဦးနှင့် သမီးဖြစ်သူဆိုမာတီတို့သည် ရထားလမ်းအားဖြတ်ကူးစဉ် မိုးသည်းထည်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့် မြေပြိုကျပြီး ရထားလမ်းပိုင်းများပျက်စီးနေကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ကြလေသည်။ ထို့ကြောင့် ရထားတစ်စင်းဦးတည် ခုတ်မောင်းလာနေသောအခါ ပျက်စီးကိန်းမဆိုက်စေရန်အတွက် သားအဖနှစ်ယောက်သည် ၎င်းတို့၏အင်္ကျံ များကို ဝှေ့ယမ်းကာ ရပ်တန့်စေနိုင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါသားအဖ၏သူရဲကောင်းဆန်သည့်လုပ်ရပ်မှာပျံ့နှံသွားပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးတစ်ဦးကပင်နေအိမ်သို့ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံခဲ့လေသည်။ “သူတို့သားအဖသာ ရထားကိုရပ်တန့်အောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ရင် လူ့အသက်တွေ ဆုံးရှုံး ကုန်မှာပဲ။ ကျွန်တော်ဒါကို သိရတဲ့အခါ သူတို့ကိုအိမ်ဖိတ်ခေါ်ပြီး သူတို့နဲ့အတူနံနက်စာစားခဲ့ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီး ဆူဒစ်ရွိင်းဘားမန်ကပြောကြားခဲ့သည်။ ရထားပေါ်တွင်ခရီးသည်ဦးရေနှစ်ထောင်ခန့်ပါရှိသဖြင့် အကယ်၍ ဆွာပန်နှင့်ဆိုမာတီတို့သားအဖသာ ရထားကို မရပ်တန့်စေခဲ့လျှင် ဝန်ကြီးပြောသလို သေသူသေ ၊ ဒဏ်ရာရသူရဖြင့် အခြေအနေဆိုးရွားသွားမည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်။ … Read more
ကားပေါ်မှာ ဓမ္မတာလာလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို ပါးပါးနပ်နပ်ကူညီခဲ့တဲ့ အမျိုးသား
ကားပေါ်မှာ ဓမ္မတာလာလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့တဲ့ ကောင်မလေးကို ပါးပါးနပ်နပ်ကူညီခဲ့တဲ့ အမျိုးသား.. ကိုရီးယားမှာသာမက အာရှမိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ အမျိုးသားတစ်ယောက်ရှိပါတယ် …။ ရုပ်ချောလို့ နာမည်ကြီးနေတာမျိုး မဟုတ်ပဲ သူ့ရဲ့ gentleman ဆန်တဲ့ အပြုအမူကြောင့် ပါ။ ဘတ်စကားပေါ်မှာ ဓမ္မတာ လာနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို တစ်ဖက် မိန်းကလေးလည်း သူ့ကြောင့် အရှက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင် ပညာသားပါပါ ကူညီပေးလိုက်တဲ့ သူ့ရဲ့ အပြုအမူကြောင့် “Straw berry Milk Oppa” ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဖြစ်ရပ်ကတော့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ ရာသီလာလို့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း လာမယ့် ရက်ကို မေ့နေခဲ့လို့ ဘာမှ အကာအကွယ်တွေ မလုပ်ခဲ့ရပါဘူး။ ပိုဆိုး … Read more
အသက် ၈၀ အရွယ်နီးပါး အဘိုးအိုနဲ့ ၂၀ တောင်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတို့ လက်ထက်ပြီးတစ်လမပြည့်ခင်မှာပဲ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြ (ရုပ်သံဖိုင်)
November 6, 2020 by Lupyo News
အသက် ၈၀ အရွယ်နီးပါး အဘိုးအိုနဲ့ ၂၀ တောင်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတို့ လက်ထက်ပြီးတစ်လမပြည့်ခင်မှာပဲ ကွာရှင်းပြတ်စဲခဲ့ကြ (ရုပ်သံဖိုင်) Zawgyi လွန်ခဲ့တဲ့တစ်လခန့်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အနောက်ဂျာဗားပြည်နယ် Subangမြို့မှာ အသက် ၇၈နှစ်အရွယ်အမျိုးသားက အသက်၁၈နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးကို လက်ထပ်ခဲ့တာကြောင့် အိုးလေးတကျော်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာ လက်ထက်ပြီး ၂၂ရက်အကြာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ ၃၀ သောကြာနေ့မှာကွာရှင်းပြတ်စဲသွားခဲ့ကြပါပြီ။ ခင်ပွန်းဖြစ်သူက ဇနီးကို ကွာရှင်းစာတစ်စောင်ပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက် Abah Sarna နဲ့ Noni Navita တို့ဟာသူတို့ရဲ့၂၂ရက်သာရှိသေးတဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို အဆုံးသတ်ခဲ့ကြကြောင်း Harian Metroသတင်းအရသိရပါတယ်။ ဇနီးသည် Noniရဲ့အမ အသက်၂၉နှစ်အရွယ် lyan က သူမညီမနဲ့Abahတို့အကြား ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ဘဲ အဲ့လိုသတင်းကြားသိရတော့ သူ့တို့မိသားစုက တုန်လှုပ်သွားခဲ့ရပြီး “အကျိုးနဲ့အကြောင်းမရှိဘဲ အဲ့လိုကိစ္စဖြစ်လာတော့ငါအတော်လေးshockဖြစ်သွားခဲ့တယ်”လို့ဆိုထားပါတယ်။ “ကျွန်မတို့မိသားစုက Abahနဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက Abahနဲ့လက်ထက်ပွဲကို ကန့်ကွက်ချင်ခဲ့တဲ့သူ့မိသားစုဆီမှာ … Read more
November 4, 2020 by Lupyo News
ထိုင်းထီဘတ်(၆)သန်းဆု မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံဆွတ်ခူး ထိုင်းရောက်မြန်မာလုပ်သားဇနီးမောင်နှံထိုင်းထီပထမဆုဘတ်(6)သန်းဆု”နှစ်စောင်တွဲဘတ်(12)သန်း” ဆွတ်ခူးခဲ့ရာ AACမဟာမိတ်အဖွဲ့ထံ ဆက်သွယ်၍ ထီဆုထုတ်ပေးပါရန် အကူအညီတောင်းခံခဲ့ AAC မှဌင်းတို့ နေထိုင်ရာဒေသသို့ သွားရောက်ကြိုဆိုပေးခဲ့ပြီး ယနေ့ ထီဆုငွေများ ထုတ်ယူပေးပြီးမြန်မာပြည်သို့ ထီဆုငွေများ ယနေ့ချက်ချင်းပဲလွှဲပို့ပေးလိုက်ပါပြီ…. ထီပေါက်ခဲ့သော နေရာကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း စူရတ်ဌာနီခရိုင် ဆီအုန်းခြံမှာအလုပ်လုပ်ရင်း ထီသည်မှာ ကံစမ်းခဲ့တာပါ၊ ထိုင်းမှာ ရောက်နေတာ (7)နှစ်ကျော်ရှိနေပြီး CI အစိမ်းရောင်စာအုပ်ကိုင်ဆောင်သောကိုစိန်မြင့်(ခ)ကိုမျိုးအောင်+မပို(ခ)မလွမ်းပို တို့ဇနီးမောင်နှံဟာမြန်မာပြည်မှာတော့မန္တလေးတိုင်း ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် အောင်ချမ်းသာကျေးရွာက ဖြစ်ပါသည်။ ကံထူးရှင်ဇနီးမောင်နှံအား လုံခြုံစိတ်ချရအောင်AAC မှ စောင့်ရှောက် ပေးခဲ့သလို ယနေ့AAC ဒါရိုတ်တာဦးခိုင် ဦးဆောင်၍ထီဆုငွေများ ထုတ်ယူပေးပြီးနောက် မြန်မာပြည်အိမ်ပြန်ခရီးကို လုံခြုံမှုအပြည့်ဖြင့် စီစဉ်ပြန်ပို့ပေးနေပါပြီ။ ဒီအပတ်တော့ တို့ မြန်မာတွေ အလှည့်ကျခဲ့ပြီလေ…. ပုံ-4-11-2020 ရက်နေ့ ထီဆုငွေများ ထုတ်ယူပြီးနောက် AAC ကိုရဲမင်း … Read more
ဘရာဇီးနိုင်ငံ လမ်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံချင်မှ ကြုံရမယ့် မြင်ကွင်းတခု..
ဘရာဇီးနိုင်ငံ လမ်းပေါ်မှာ တွေ့မြင်ခဲ့ရတဲ့ တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံချင်မှ ကြုံရမယ့် မြင်ကွင်းတခု.. ပြီးခဲ့တဲ့လ ၃၁ ရက်နေ့က ဘရာဇီးနိုင်ငံ (Sao Pao Laulo ဆောင်ပေါင်လူးခရိုင် အီတူဝေလာဝါမြို့နယ် နားက Faculty တက္ကသိုလ်အနီး လမ်းမတစ်ခုတွင် (Anaconda) မြွေကြီးတစ်ကောင် လမ်းဖြတ်ကူးနေတာကို Dr. Francisco Maeda မှ တွေ့မြင်ခဲ့ပုံကို ကြောက်ကြောက်နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားပုံပါ ဧရာမမြွေကြီးဟာ ပုံပါအတိုင်းသူတစ်ကောင်တည်းမဟုတ်ဘဲ နောက်တော်ပါး အခြားမြွေအမျိုးအစားမတူသည့် ၅ ကောင်ဟာ ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်ပြီး ထပ်ချပ်မကွာလိုက်လာပုံက မြင်ရသူအဖို့မှင်သက်သေနေမိပါတယ် ။ ဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးက တစ်သက်မှာတစ်ခါ ကြုံချင်မှကြုံရပါမည် ။ အင်မတန်ထူးခြားနေပါသည် ။ ရုပ်သံကိုအောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ် (စည်သူမောင်) ============ Unicode ဘရာဇီးနိုငျငံမှာ တှမွေ့ငျခဲ့ရတဲ့ တဈသကျမှာတဈခါ ကွုံခငျြမှ ကွုံရမယျ့ မွငျကှငျး … Read more
ကမ္ဘာ့ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေ နေတဲ့ရွာ
ကမ္ဘာ့ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေ နေတဲ့ရွာ အမျိုးသမီးတွေအတွက် ဆံပင်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အရာပါ။ အမျိုးသမီးအများစုအနေနဲ့ ဆံပင်ရှည်ထားရခြင်းကို နှစ်သက်မြတ်နိုးလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆံပင်အရှည်ဆုံး အမျိုးသမီးတွေနေထိုင်တဲ့ ရွာကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ Huangluo Yao ဆိုတဲ့ ကျေးရွာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ လူမျိုးစုတွေကတော့ ဆံပင်ရှည်ထားခြင်းဟာ ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတယ်လို့ ယုံကြည်ထားကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အဲဒီရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ မိသားစု ၆၀ လောက်က ဆံပင်အရှည်ထားလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အဲဒီ ကျေးရွာမှာ နေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဆံပင်အရှည်က ၃ ပေကနေ ၆ ပေ အထိ ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း “ကမ္ဘာ့ ဆံပင်အရှည်ဆုံးကျေးရွာ” အဖြစ် ဂင်းနစ် မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီကျေးရွာကို ရောက်ဖို့ … Read more
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားနေရတဲ့ သနားစရာအမျိုးသမီးရဲ့ ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရပ်
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာခံစားနေရတဲ့ သနားစရာအမျိုးသမီးရဲ့ ဝမ်းသာစရာဖြစ်ရပ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဘက် ကွေ့ကျိုးခရိုင် စုန်းချီမြို့နယ် တာ့ကျူ့ရွာလေးတစ်ရွာက အသက် ၃၆ နှစ် မစ္စဟွမ် ကွာရှောင် ရဲ့ဝမ်းဗိုက်ဟာ လွန်ခဲ့ ၂၀၁၈ ခုနှစ်ကနေ တစ်ဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာလိုက်တာ ယခုဆိုရင် ဗိုက်အလေးချိန် ကီလို ၄၀ အထိရှိလာပြီး ဧရာမဘောလုံးကြီးတစ်လုံးကိုလွယ်ထားရသလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ၊ နှစ်နှစ်အတွင်းဘယ်ဆေးခန်းကိုမှပြသခြင်းမရှိသလို သူမဟာသားသမီး ၂ ယောက်နဲ့ဆင်းရဲချို့တဲ့စွာဘဝကိုရုန်းကန်နေရရှာသူဖြစ်တယ်လို့ တရုတ် ဒေးလီးနယူစ်မှာဆောင်းပါးရှင်ကရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ။ သားအိမခြေါငြးအနီးတဈဝိုကမြှာရှိတဲ့အသားပိုကနတဆေင့တြဖှညြးဖှညြးကှီးထှားလာတာလို့ဆေးပညာရှငတြှကဆြေိုပါတယြ ။ သူမအတွက်ခွဲစိတ်ကုသစရိတ်လေးရအောင်ဆိုပြီး ရွာသူရွာသားများစုပေါင်းကာ အလှူငွေလိုက်လံကောက်ခံခဲ့ရာမှ တရုတ်သတင်းမီဒီယာများ အထိပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပါတယ် ၊ တရုတ်ယွမ်ငွေ ၁ သိန်းခန့်ရကြပါတယ် ၊ သူမအတွက်အင်မတန်အန္တရာယ်များတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့က ဆေးရုံကိုသားသမီး ၂ ယောက်နဲ့အတူရောက်ရှိခဲ့ကြပြီဖြစ်ပါတယ် ၊ သူမရဲ့သတင်းဟာ တရုတ်နိုင်ငံအနှံ့ပျံ့နှံ့သွားပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာများမှတဆင့်ဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့လှူဒါန်းမှုပြုခဲ့ခြင်းကြောင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက်အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့တာပါလို့သူမကဆိုပါတယ် … Read more